Doorashadii Aqalka Hoose ee Xildhibaanada Federaalka oo dib uga bilaamatey Jowhar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Doorashadii Aqalka Hoose ee Xildhibaanada Federaalka oo dib uga bilaamatey Jowhar
Doorashadii Aqalka Hoose ee Xildhibaanada Federaalka oo dib uga bilaamatey Jowhar
November 22, 2016 - By: Mohamed Jeenyo
Guddiga Doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa ku dhawaaqey in maanta oo Salaasa ah dib loo bilaabayo doorashadii Xildhibaanada Aqalka Hoose ee ka dhacaysey Jowhar, taas oo hakad ku jirtey maalmihii u danbeeyey, kadib gacan ka hadal halkaas ka dhacay.
Guddiga Doorashada ayaa sheegay in dib loo dhigey kursigii muranka dhaliyey ee beesha Jidle/Gugundhabe sida ay ku sheegeen war ay soo dhigeen barta Twitterka. Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in cidda keliya ee gudaha u geli karta hoolka doorashada ay tahay ciidanka AMISOM oo aan lagu arki karin ciidamo ama Malayshiyaad kale oo Soomaali ah.
Waxaan ogolaannay in Jowhar dib looga bilaabo doorashada Golaha Shacabka. Dib baa loo dhigay Kursiga beesha Jidle/Gugundhabe #Doorashada2016
— Doorashada2016 (@doorashada2016) November 22, 2016
Doorashadii maanta ka dhacdey Jowhar, ayaa waxaa lagu doortey saddex Xildhibaan, waxaa ku soo baxay Wasiir kuxigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdullaahi Colaad Rooble, oo horeyna uga tirsanaa Baarlamaanka, waxaana uu beddalay Walaalkiis Saleebaan Colaad Rooble oo sanadkii 2009 lagu diley Hotel Shaamow.
Samiira Xassan Cabddulle ayaa iyaduna kamid noqotey Xildhibaanada maanta la doortey, waxaana ay horey u ahayd Xildhibaan. Yuusuf Xusseen Axmed ayaa ahaa qofka saddexaad ee maanta Jowhar lagu doortey.
Dhanka Galmudug ayaa sidaan oo kale doorashadu maanta dib uga bilaamatey waxaana lagu doortey ugu yaraan saddex Xildhibaan.